merolagani - अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग्दै शेयर लगानीकर्ताहरु अनसन बस्ने
अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग्दै शेयर लगानीकर्ताहरु अनसन बस्ने
शेयर बजार तिब्र गतिमा ओरालो लागेका बेला लगानीकर्ताहरु सम्पत्तिको रक्षका लागि भन्दै अनसन बस्ने भएका छन् । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको राजिनामा माग गर्दै मंसिर २३ आइतबारदेखि अनसानमा बस्ने भएका हुन् ।
शेयर बजारका सम्बन्धमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा नकरात्मक रहेको भन्दै यस अघिदेखि नै लगानीकर्ताहरु रुष्ट थिए ।
पछिल्ला दिनमा अनलाइन कारोबार प्रणाली, समग्र वित्तीय बजारको अवस्था लगायत विभिन्न कारणले बजार तिब्र गतिमा ओरालो लाग्न थादेको छ ।
यसै सन्दर्भमा लगानीकर्ताहरुले दवाब समुह बनाएर रिले अनशन बस्ने निर्णय गरेका हुन् । पूँजी बजार बिस्तार तथा सुधार गर्दै आम लगानीकर्ताको सम्पत्तीको रक्षा गर्नका लागि अर्थमन्त्रीको राजिनामा माग गर्दै रिले अनसन बस्न लागिएको दवाब समुहले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
नेपाल स्टक एक्सचेञ्जको सिंहदरबार प्लाजास्थित कार्यालयमा आउँदा आइतबार बिहान १० बजेदेखि रिले अनसन सुरु हुने बताइएको छ ।
यस्ता छन दबाब समूहका दश माग
३. धितोपत्र बोर्डले तीन बर्ष अघिदेखि गैर आवासीय नेपाली र विदेशमा बस्ने नेपालीलाई पूँजी बजारमा ल्याउन कार्य्विधि बन्दै गरेको भन्दै आएकोमा तत्काल सो कार्य्विधि लागु गरी उनीहरुलाई पूँजी बजारमा भित्र्याईयोस् ।